Ultra HD 4K PTZ Camera-UV401A ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Minrray
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > 4K PTZ ကင်မရာ > Ultra HD 4K PTZ ကင်မရာ -UV401A
Ultra HD၊ Wide View Angle၊ Multi-protocols များ
UV401 Ultra HD 4K PTZ Camera-UV401A သည်ပြီးပြည့်စုံသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပေးသည်။ ၎င်းသည် brushless motor နှင့်အဆင့်မြင့်သော ISP processing algorithm ကိုတပ်ဆင်ထားပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသောပုံရိပ်နှင့်ချောမွေ့သောလှုပ်ရှားမှုကိုပေးသည်။ ၎င်းသည် H.264 / H.265 encoding ကိုထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့်နိမ့်သော bandwidth အခြေအနေများအောက်တွင်လှုပ်ရှားမှုဗီဒီယိုကိုပိုမိုကျွမ်းကျင်စွာနှင့်ရှင်းလင်းစေသည်။
UV401 Ultra HD 4K PTZ ကင်မရာ -UV401A offers perfect functions, superior performance and rich interfaces. It is featured with brushless motor and advanced ISP processing algorithm to provide high quality image and smooth motion. It supports H.264/H.265 encoding which makes motion video more fluent and clear under low bandwidth conditions.
.Pan / စောင်း Feature ကို
Brushless DC မော်တာ
၁ / ၂.၅ လက်မအရည်အသွေးမြင့် 4K SONY CMOS အာရုံခံကိရိယာ; 8.51 megapixel, resolution သည် 4K (3840x2160) အထိရှိပြီး frame rate 60fps အထိရှိသည်။
12.4 optical zoom မှန်ဘီလူး, 80.4 °FOVနှင့်အတူပုံပျက်မရှိဘဲFOV။
ဆူညံသံနည်းသော CMOS သည်အလွန်မြင့်မားသောSNRပုံရိပ်ကိုသေချာစေသည်။ အဆင့်မြင့် 2D / 3D ဆူညံမှုလျော့ချရေးနည်းပညာသည်ပုံရိပ်ကိုကြည်လင်ပြတ်သားစေရန်အတွက်ဆူညံမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
အသံ / ဗွီဒီယိုချို့တဲ့မှုစံချိန်တင်
LAN သည် H.264 / H.265 ဗီဒီယိုချုံ့ခြင်းကိုထောက်ပံ့သည်။ USB3.0 သည် MJPG, H264, YUY2, NV12 ကိုထောက်ပံ့သည်။ A-IN သည် AAC, MP3 နှင့် G.711A အသံချုံ့မှုကိုထောက်ပံ့သည်။
8000, 16000,32000,44100,48000 နမူနာကြိမ်နှုန်းနှင့် AAC, MP3 နှင့် G.711A အသံချုံ့ထောက်ပံ့ပေးသည်။
ပါ ၀ င်သည့်ဆွဲငင်အားအာရုံခံသည် PTZ ကိုအလိုအလျောက်လှန်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။
.kultiple ကွန်ယက် protocol ကို
ONVIF, GB / T28181, RTSP, RTMP protocols များကိုထောက်ပံ့သည်။ streaming server (Wowza, FMS) နှင့်လွယ်ကူစွာဆက်သွယ်နိုင်သော RTMP push mode; RTP multicast mode; VISCA ထိန်းချုပ်မှု protocol ကို
RS422 (RS485 နှင့်သဟဇာတ); အတွင်းနှင့်အပြင် RS232; RS232 အဆငျ့ဆငျ့ဆက်သွယ်မှု
VISCA, PELCO-D, PELCO-P protocols များကိုထောက်ပံ့ပါ။ အလိုအလျောက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း protocols များကိုထောကျပံ့။
ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု ၂၅၅ ခု (ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုအတွက် ၁၀ ကြိုတင်ညှိထားခြင်း) အထိ။
.IR & ကြိုးမဲ့အဝေးထိန်း
IR အဝေးထိန်း (ပုံမှန်)
2.4G ကြိုးမဲ့ဝေးလံခေါင်သီသောထိန်းချုပ်မှုသည်ထောင့်၊ အကွာအဝေးနှင့်အနီအောက်ရောင်ခြည်အနှောင့်အယှက်များကြောင့်ထိခိုက်ခြင်းမရှိပါ။ Far-End ထိန်းချုပ်မှုကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။
UV401A: 80.4 °FOV(12X Optical Zoom)
f = ၃.၈၅mm × ၄၃.၀၆ မီလီမီတာ± ၅%
Horizontalï¼š7.59Ëšï¼ˆteleï¼ ï½ 80ž80.4Ëšï¼ˆwideï¼ ‰
ဒေါင်လိုက် Ë4.6Ëšï¼ˆteleï¼ ï½ž50.0Ëšï¼ˆwideï¼ ï¼
1 / 2.5 လက်မ SONY CMOS အာရုံခံကိရိယာ
HDMIVideo Output အမျိုးအစား -
USB3.0 နှင့် USB2.0 နှင့်သဟဇာတ:
အော်တို / လက်စွဲစာအုပ် / တွန်းအားတစ်ခု / သတ်မှတ်ထားသောအရောင်အပူချိန်
Auto/ Manual / Shutter Priority /aperturePriority / Brightness priority
USB2.0ï¼ˆ အမျိုးအစား B၊ USB2.0ï¼ compatible၊ A-IN, RS232-in & out နှင့်သဟဇာတဖြစ်သော HDMI, LAN (POE)၊
RS482ï¼‰၊ Dial switch, DC12V,ပါဝါSwitch နှင့်လိုက်ဖက်ကိုက်ညီမှုရှိသည်
Doubletrack 3.5mm linear Input ကို
10M / 100M / 1000Madaptive Ethernet port၊ POE နှင့် audio / video output တို့ကိုထောက်ပံ့သည်
RTSP, RTMP, ONVIF, GB / T28181, ကွန်ယက် VISCA ထိန်းချုပ်မှုပရိုတိုကောများ၊ RemoteUpgrade ကိုပံ့ပိုးကူညီခြင်း၊ reboot နှင့် reset
RS232-IN, RS232-OUT, RS422 (RS485 နှင့်သဟဇာတ)
Serial ဆက်သွယ်ရေး protocol
VISCA / Pelco-D / Pelco-P; Baud ရှားပါး: 115200/38400/9600/4800/2400
UVCï¼ˆvideoï¼ ï¼ŒUACï¼ˆaudioï¼ ‰
input: AC110V-AC220V; output: DC12V / 2.5A
-30 ° + + 90 °
0.1 ° / sï½120° / s
0.1 ° / sï½80° / s
Pan: 120 ° / sï¼ŒTilt: 80 ° / s
255 ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ (အဝေးမှထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့်ကြိုတင် ၁၀ ကြိုတင်မှာပါ)
157.5ï¼ˆLï¼ ‰ mm × 189mmï¼ˆWï¼ 201 × 201mmï¼ˆHï¼ ‰
ပါဝါထောက်ပံ့မှု၊ RS232 ထိန်းချုပ်သောကေဘယ်၊ USB3.0 ဆက်သွယ်မှုကေဘယ်၊ အဝေးထိန်းခလုတ်၊ UserManual
Back Panel မျက်နှာပြင်
hot Tags:: လက်ကား၊ ၀ ယ်ခြင်း၊ တရုတ်၊ လျှော့စျေး၊ စျေးအနိမ့်၊ နောက်ဆုံးပေါ်၊ အဆင့်မြင့်၊ အကြမ်းခံ၊ အရည်အသွေး၊